News | ShweBiz.com | Page 4
NSW Arts Minister resigns after breach of COVID-19 Lockdown Rule
Posted by shwebiz News
ကိုဗစ်-၁၉ စည်းကမ်းကို မလိုက်နာလို့ အနုပညာရေးရာဝန်ကြီး ရာထူးကနှုတ်ထွက်။ NSW ပြည်နယ် အနုပညာရေးရာ ဝန်ကြီး Don Harwin ဟာ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို မလိုက်နာတဲ့အတွက် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ဒဏ်တပ်ခံခဲ့ရပြီးနောက် အခုအခါမှာတော့ ရာထူးကနေ နှုတ်ထွက်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Mr Harwin ဟာ ဒီတစ်ပတ် အစောပိုင်းတုန်းကပဲ Pearl Beach က သူ့ရဲ့ ဟောလီးဒေးအိမ်မှာ ရောက်နေတာကို တွေ့ရပြီးတဲ့နောက် ဒဏ်ကြေးဆောင်ဖို့ အပြစ်ပေးခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအိမ်ဟာ ဆစ်ဒနီမြို့ အရှေ့ပိုင်းက သူ့ရဲ့ နေအိမ်နဲ့ တစ်နာရီလောက် ဝေးတဲ့နေရာမှာ ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရက မဖြစ်မနေ လိုအပ်မှသာ အပြင်ထွက်ဖို့ သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီး ဟောလီးဒေးသွားတာတွေ၊ […]
Western Australia အတွင်း essential worker အရေးကြီးတာဝန်ရှိသည့်ဝန်ထမ်းများမှအပ မည်သည့်ခရီးသွားခြင်းကိုမှခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း။ WA ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကို ဇုန် ၉ ပိုင်းခွဲပြီး၊ ဇုန်တစ်ခုချင်းစီ၏ နယ်နိမိတ်များတွင် ကျပန်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်များ နှင့် လမ်းပိတ်ဆို့မှုများရှိမည်ဖြစ်ပြီး ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ဇုန်နယ်စပ်ကိုဖြတ်ကူးမိသူမည်သူမဆိုဒဏ်ငွေ $1000 ရိုက်မည်။ ၁) Perth and Peel (one zone) ၂) The South-West ၃) The Great Southern ၄) The Wheatbelt ၅) The Mid-West ၆) The Kimberley ၇) Pilbara ၈) Gascoyne ၉) Goldfields-Esperance WA ဝန်ကြီးချုပ်မာ့ခ်မက်ဂွမ်က COVID-19 ပြန့်ပွားမှုကို ရပ်တန့်ရန်အတွက် အထူးအရေးကြီးသဖြင့် […]
Experience from Burmese Specialist Doctor, COVID-19 epicentre New York
COVID-19 ဗဟိုချက်မနေရာဖြစ်လာနေတဲ့ နယူးရောက်က မြန်မာအထူးကုဆရာဝန် အတွေ့အကြုံ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှုကြောင့် သေဆုံးသူ ၆၀၀ ကျော်နေပြီး ကူးစက်နေသူပေါင်း ၅၀,၀၀၀ သောင်းမကရှိလာနေတဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုလည်း ရောဂါကူးစက်လာနေပြီလို့ နယူးရောက်မြို့ ကူးစက်အထူးကုဆရာဝန် ဒေါက်တာဇေယျာသက်က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ နယူးရောက် မြို့တော်ဝန် BILL DE BLASIO က လည်း မကြာသေးခင်နာရီပိုင်းအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ နယူးရောက်မြို့ဟာ COVID-19 ကူးစက်မှု အသစ် ဗဟိုချက်မနေရာလိုဖြစ်လာနေပြီလို့ ကြေညာသွားပါတယ်။ လက်ရှိ နယူးရောက်မြို့ တမြို့တည်းမှာတင် ရောဂါကူးစက်ခံရသူပေါင်း ၁၅၀၀၀ နီးပါးရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တနေ့ကို ရောဂါအခြေအနေဆိုးနေသူပေါင်း ၂၀ နီးပါးနှုန်း ကြည့်ရှုနေရပြီး လောလောဆယ် သူ့ရဲ့ လူနာတွေထဲမှာ သေဆုံးသူ ၆ ဦးမက ရှိနေပြီလို့ဒေါက်တာဇေယျာသက်က ပြောပါတယ်။ […]
Tisarana Vihara COVID-19 Announcement
တိသရဏ ၀ိဟာရကျောင်း COVID-19 အသိပေး ကြေညာချက် ဓမ္မမိတ်ဆွေ အပေါင်းတို့ခင်ဗျား တိသရဏ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း သို့လူအများ လာရောက်ခြင်း၊ စု၀ေးခြင်းကို Australia နိုင်ငံအစိုးရ၏ စည်းကမ်းချက်နှင့်အညီ ရပ်ဆိုင်းထားပါကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ပုံမှန်ပြုလုပ်နေသော စနေနေ့ ၀တ်ပြုခြင်း၊ တရားနာခြင်းများ၊ ရန်ပုံငွေရှာစျေးရောင်းပွဲများ၊ ဘာသားရေးပွဲတော်များ အားလုံးတို့ ကိုလည်း Australia နိုင်ငံအစိုးရ၏ တားမြစ်မှု တည်ရှိနေသမျှ ကာလပတ်လုံး ရပ်ဆိုင်းထားပါသည်။ ထို့အပြင် ဆရာတော်များ၏ ကျန်းမာရေး နှင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ လာရောက် ကြသော ဓမ္မမိတ်ဆွေ အပေါင်းတို့၏ ကျန်းမာရေးအတွက် 1. မိမိတို့၏နေအိမ်သို့ ဘုန်းတော်ကြီများအား ဆွမ်းပင့်လက်ခံခြင်းများကိုလည်း ရပ်ဆိုင်းထားပါသည်။ 2. ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခြင်းများ၊ ကျောင်းတွင်း/ပြင်ရှိပစ္စည်းများ၊ တံခါးများ၊ ပြင်ပရှိအမိုက်ပုံးများ၊ ရေပိုက် စသည်တို့ကို […]
What you can and can not do under Australia Coronavirus Shutdown
ဩစတေးလျ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်- ပိတ်ချမှုအတွင်း ဘာတွေ လုပ်ခွင့်ရှိပြီး ဘာတွေလုပ်ခွင့်မရှိဘူးလဲ? တနင်္လာနေ့ မွန်းတည့်ချိန်ကစပြီး နေရာအတော်အများများနဲ့ လုပ်ငန်းအတော်များများကို ပိတ်ချလိုက်ကြပါတယ်။ ဒီလို လုပ်ဆောင်ရတာကတော့ အစိုးရအနေနဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်လောက် အကွာမှာ နေထိုင်ကြရမယ်ဆိုတာကို သတ်မှတ်ထားပေမယ့် လူတွေက မလိုက်နာလို့ အခုလို ကန့်သတ်တင်းကြပ်မှုတွေ တိုးမြင့်လုပ်ဆောင်ရတာလို့ ပြောပါတယ်။ လူတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘယ်လောက်အကွာမှာ နေသင့်တယ်၊ လူဘယ်လောက်သာ စုဝေးရမယ် စသည်ဖြင့် လမ်းညွန်ချက်တွေ သတ်မှတ်းထားပေမယ့် လူတွေက လိုက်နာတာမရှိတဲ့အတွက် ရောဂါ ပြန့်ပွားမှုတွေ၊ အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ ပိုများနိုင်တဲ့အတွက် လုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီအချိန်ဟာ ဘယ်လောက်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်၊ အခြေအနေကောင်းတခုအတွက် အတူတူ လက်တွဲလုပ်ဆောင်ဖို့ ဘယ်လောက် အရေးကြီးတဲ့အချိန် ဖြစ်သလဲ ဆိုတာကို သြစတြေးလျံတွေကို အသိပေးလိုတယ်ဆိုတဲ့ […]
PM announces new rules for schools
ဝန်ကြီးချုပ် Scott Morrison မှ မိမိတို့ ကလေးငယ်များ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် မိဘများအနေဖြင့်ကျောင်းမပို့လိုသည့်ဆန္ဒရှိပါလျှင် အိမ်မှာပဲ ထားနိုင်ပါကြောင်း ဩစတေးလျတဝှမ်းရှိ မိဘများကိုပြောကြားလိုက်သည်။ သို့သော် ကျောင်းပို့လိုသည့်မိဘများအတွက်လည်း စာသင်ခန်းများကို ယခု Term စာသင်ကာလ ကုန်ဆုံးသည့်ကာလအထိ ဖွင့်ထားမည်ဖြစ်သည်။ Easter Holidays ကျောင်းပိတ်ရက်များပြီးလျှင်လည်း ၎င်းကာလနောက်ဆုံးအခြေအနေအပေါ်မူတည်၍ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများ၏ အကြံပေးချက်အတိုင်း ပြန်ဖွင့်ဖို့ မဖွင့်ဖို့ကို ဆုံးဖြတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ယခုည တိုင်းပြည်သို့ပြောကြားသည့် မိန့်ခွန်းတွင်ပြောကြားလိုက်သည်။ ဝန်ကြီးချုပ်က ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့မှုကိုရပ်တန့်ရန် အစိုးရနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပါကကျောင်းများအားတစ်နှစ်လုံးပိတ်ထားနိုင်သည်ဟုသတိပေးသည်။ ကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုပေမည့် ရိုးရိုးကျောင်းပိတ်ရက်မဟုတ်ကြောင်း၊ သို့ပါ၍ ဘယ်နေရာကိုမှ အလည်အပတ်ခရီးမသွားကြပါဖို့၊ မည်သည့် စုရုံးခြင်းမှမလုပ်ကြဖို့လိုသည် ဝန်ကြီးချုပ်က အထူးပြောကြားသည်။ Source# https://7news.com.au/lifestyle/health-wellbeing/prime-minister-announces-new-rules-for-schools-amid-covid-crisis-c-757176
ယနေ့နောက်ဆုံးသတင်းများအရ Western Australia တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူတွေ့ရှိမှု ၁၂၀ ဦးရှိပြီ။ ဩစတေးလျတဝှမ်း ပိုးတွေ့သူ ၁၂၆၉ ဦး၊ တစ်ရက်တည်း ၃၉၅ ဦးတိုး။ ဩစတေးလျတဝှမ်း ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေးဆုံးသူ ၇ ဦး။ WA ပြည်နယ် နယ်စပ်များပိတ်ပြီ။ Rottnest Island ကို quarantine zone ဖြစ်ဖို့ရှိ မိသားစုအတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရှိသည်ဟု သံသယရှိလျှင် GP ထံဖုံးပဲဆက်ပါ (မသွားပါနှင့်) (သို့မဟုတ်) Coronavirus Health Information Hotline ဖုံးနံပါတ် 1800 020 080 ကိုဆက်သွယ်ပါရန်။ Source# Mark McGowan Tweets, WA Today https://www.watoday.com.au/national/western-australia/wa-coronavirus-live-state-s-confirmed-cases-to-rise-above-100-as-hospitals-prepare-20200321-p54ckn.html
WA coronavirus LIVE updates
WA တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူတွေ့ရှိမှု နေ့ချင်းညချင်း ၂၆ ယောက်ထပ်တိုး။ WA တွင် ပိုးတွေ့သူ လူပေါင်း ၉၀ ဖြစ်သွား။ သြစတြေးလျနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ရောဂါဖြစ်ပွားသူ ၁၀၄၉ ဦး ရှိ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရလူပေါင်း ၂၀၉၀၀၀ ကျော်သည် COVID-19 ကူးစက်ခံခဲ့ရ။ လူပေါင်း ၈၆၀၀၀ ကျော်သည်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရပြီးနောက်ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၁၁၀၀၀ ကျော်ရှိ။ Source# WA Today (https://www.watoday.com.au/national/western-australia/wa-coronavirus-live-popular-science-hub-forced-to-close-as-visitors-dwindle-20200320-p54cfp.html)
Big4Aussie Banks offerapause on mortgage repayment
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း ဩစတေးလျ၏ ဘဏ်ကြီးလေးခု ဖြစ်သော NAB, Commonwealth, ANZ နှင့် Westpac တို့သည် အိမ်ကြွေး ရှိနေသူ များအနေဖြင့် mortgage repayment ကြွေးဆပ်ခြင်းများကို အနည်းဆုံး ၆လခန့် ခေတ္တရပ်နားပေးမည်ဟု7News တွင်ရေးသားဖော်ပြထားသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း Small Business များမှ ဘဏ်ချေးငွေအတွက် Loan Repayment ပြန်ဆပ်ရမှုများကိုလည်း ဆိုင်းငံ့ပေးထားမည် ဟုရေးသားထားသည်။ မူရင်းသတင်းအသေးစိတ်နှင့် မည်သည့်အခြေအနေမျိုးများတွင် အဆိုပါအကြွေးဆိုင်းငံ့မှုများ အကျုံးဝင်သည်ဆိုသည်ကို အောက်ပါ Link များတွင်၎င်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်များအသီးသီး၏ Link များတွင်လည်းကောင်း ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ https://7news.com.au/business/finance/big-four-banks-offer-homeowners-a-pause-on-their-mortgage-repayments-c-755082 NAB Facebook Page Announcement: https://www.facebook.com/NAB/ CBA Facebook Page Announcement: […]
64 confirmed Coronavirus case in WA
ယနေ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု ၁၂ ဦးထပ်မံတွေ့ရှိ သဖြင့် ယခုအချိန်အထိ WA တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှု ၆၄ ဦး ရှိသွားပြီဖြစ်၊ လူပေါင်း ၈၀၀၀ ဦးစမ်းသပ်ပေးပြီးဖြစ်။ ဒေသခံလူမှုအသိုင်းအဝိုင်း အချင်းချင်း ပျံ့နှံ့မှုအဆင့်သို့ကူးပြောင်းသွားပြီဖြစ်။ COVID-19 ဆေးခန်းအသစ်များ Perth အခြေစိုက်ဆေးခန်းသုံးခုကို အားဖြည့်ရန် Joondalup, Midland, Armadale, Rockingham နှင့် Bunbury တို့တွင် တိုးချဲ့ ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်ဖြစ်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုသုံးပစ္စည်းများ ပြတ်လပ်မှု ကြောင့် ပြည်နယ်အစိုးရသည် စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာအရည်အချင်းပြည့်မှီမှုပြောင်းလဲမှုများကို ကြေငြာရန်မျှော်လင့်ရသည်ဟု ဆို။ Qantas ကလာမည့်နှစ်လအတွင်းပါ့သ်မြို့မှအရှေ့ပိုင်းဒေသများသို့ပျံသန်းမှု၏ကြိမ်နှုန်းကိုထက်ဝက်လျှော့ချလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ Source# https://www.watoday.com.au/national/western-australia/wa-coronavirus-live-new-tests-show-results-in-30-minutes-as-first-case-of-community-transmission-reported-20200319-p54bwe.html